Jona 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Jona wee nọrọ n’afọ azụ̀+ ahụ kpekuo Jehova bụ́ Chineke ya ekpere 2 wee sị: “N’ahụhụ ka m nọ kpọkuo Jehova,+ o wee za m.+ N’afọ Shiol ka m nọ tie mkpu maka enyemaka.+ Ị nụrụ olu m.+ 3 Mgbe ị tụbara m n’ala ala mmiri, n’etiti ogbu oké osimiri,+ Oké osimiri wee kpuchie m. Oké mmali mmiri na ebili mmiri gị niile—n’elu m ka ha gafere.+ 4 Ma mụ onwe m sịrị, ‘A chụpụwo m n’ihu gị!+ Olee otú m ga-esi ahụ ụlọ nsọ gị ọzọ?’+ 5 Mmiri kpuchiri mkpụrụ obi m;+ ogbu mmiri kpuchikwara m. Ahịhịa tụhịrị m n’isi. 6 N’ala ala ugwu ka m gbadara. E ji ihe e ji atụchi elu ala tụchibido m ruo mgbe a na-akaghị aka. Ma ị napụtara ndụ m n’olulu, Jehova bụ́ Chineke m.+ 7 Mgbe mkpụrụ obi m tụbọrọ,+ ọ bụ Jehova ka m chetara.+ Ekpere m wee ruo gị ntị, n’ime ụlọ nsọ gị.+ 8 Ma ndị na-efe arụsị ụgha na-ahapụ onye na-egosi ha obiọma.*+ 9 Ma mụ onwe m ga-eji olu ekele m chụọrọ gị àjà.+ M ga-emezu ihe m kwere ná nkwa.+ Ọ bụ Jehova nwe nzọpụta.”+ 10 Ka oge na-aga, Jehova nyere azụ̀ ahụ iwu, o wee gbọpụta Jona n’ala akọrọ.+